Immisa ayuu fiican yahay Whisky? Ka warran $60,000 ee Qorraxda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Immisa ayuu fiican yahay Whisky? Ka warran $60,000 ee Qorraxda
Yamazaki 55 ayaa hadda diyaar u ah Tafaariiqda Safarka Caalamiga ah
Aqalka Suntory wuxuu maanta soo bandhigay tiro aad u xaddidan oo ah daabacaad aad u xaddidan Yamazaki 55 whiskey oo loogu talagalay Tafaariiqda Socdaalka Caalamiga ah, oo lagu heli karo qiime tafaariiqeed oo lagu taliyay oo ah $ 60,000 USD.
Dhalo 2020, Yamazaki 55 waa House of Suntory siideyntii ugu da'da weyneyd taariikhdeeda oo ay sii deyso qoyska aasaaska u ah whiskey-ga Japan, iyadoo u dabaaldegeysa xilligii "Showa" ee Japan ee 1960-meeyadii.
Yamazaki 55 wuxuu diyaar u noqon doonaa inuu doorto Tafaariiqda Socdaalka Caalamiga ah ee dhalooyinka laga helay London, Paris, Hainan, Hong Kong, Taipei, Amsterdam, Seoul, Delhi, Istanbul, Dubai iyo Singapore.
Beam Suntory wuxuu ku deeqi doonaa $ 5,000 USD dhalo kasta oo lagu sii daayo ururinta 100-dhalo ee sannadkan, wadar ahaan $ 500,000 USD, The White Oak Initiative, oo ah koox u heellan sii jiritaanka muddada dheer ee kaymaha cad ee Ameerika.
Yamazaki 55 waa isku darka malqooyin keli ah oo qaali ah, oo ay ka muuqdaan qaybo la qoday 1960 oo uu kormeeray aasaasihii Suntory Shinjiro Torii ka dibna ku dhex jiray sanduuqyada Mizunara; iyo 1964 -kii oo uu hoggaaminayey Suntory's Master Master Blender Keizo Saji ka dibna ku duugnaa sanduuqyada White Oak.
Madaxa Jiilka Shanaad ee Suntory Blender Shinji Fukuyo wuxuu si dhow ula shaqeeyay Jiilka Saddexaad Master Blender Shingo Torii si uu u geeyo farshaxankooda saxiixa ee isku darka si ay si sax ah u muujiyaan qoto dheeraanta, kakanaanta iyo xikmada gaarka ah ee Yamazaki 55.
Dareeraha ka soo baxaa wuxuu leeyahay midab buluug qoto dheer; caraf udgoon oo xoog leh oo ka samaysan alwaax kabo ah iyo miro si fiican u bislaaday; macaan, xoogaa qadhaadh iyo dhagaxa leh; oo xoogaa qadhaadh haddana macaan oo qani ah dhammayn.
Manuel González, Agaasimaha Suuqgeynta GTR ee Beam Suntory, ayaa yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fursad u helno inaan u siino dadka safarka ah wax u gaar ah oo gaar ah sida Yamazaki 55, oo ah muujinta ugu da’da weyn ee ka timid Aqalka Suntory. Badeecadan daabacaadeed ee aadka u xaddidan waxaa lagu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah guryahayaga ugu wanaagsan ee goobaha Qorraxda, waxaana lagu xoojin doonaa olole firfircooni isku dhafan. Waxaa naga go'an inaan kobcino Tafaariiqda Safarka Caalamiga ah annagoo xoojinayna wax-soo-saarkayada cusub oo aan u keenaynaa khibradda dukaamaysiga premium-ka ugu wanaagsan nolosha macaamiisheena. "
'Yamazaki' waxa lagu xardhay sawir-qaadis dhalada kasta oo crystal ah, halka calaamadaynta da'da lagu xoojiyay boodhka dahabka ah oo lagu ilaaliyo maro. Furitaanka dhalada waxa lagu duuduubay warqadda gacmaha lagu sameeyo ee Echizen washi waxaana lagu xidhay xadhig dhejis ah oo Kyo-kumihimo ah, farshaxan dhaqameed ka yimid Kyoto. Dhalo kastaa waxay ku xidhan tahay sanduuqa afka laga sameeyay ee looxa Mizunara ee Japan oo lagu dahaadhay Suruga lacquer.